Sida Dawladda Imaaraadku Mushaarka U siinayeen Saraakiisha Iyo Ciidamada Soomaalida Halkan Ka Akhriso
Tuesday 17th April 2018 20:44:49 in Wararka by Super Admin
Muqdisho (GGN)-Dowlada Somalia ayaa xiriirka u gaabisay dowlada Isutaga Imaaraadka Carabta tan iyo markii laga warhelay inay taageero siiso Shaqsiyaadka mucaaradka ku ah Horumarada ka socda dalka. Dowlada Isutaga Imaaraadka ayaa muddo fog dhaqaale ku bixineysay kuwo ku caanbaxay qaska iyo fulista danaha gaarka, kuwoo oo soo ifbaxay wixii ka danbeeyay doorashada Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Imaaradka ayaa dhaqaalaha ugu badan ku bixineysay ciidamada dowlada Federaalka kuwaa oo u muuqday inay ahaayen kuwo si gaara ay ugu shaqeysan jirtay, isla markaana gudaha Somalia looga yaqaanay ‘’Ciidamada Imaaraadka’’
Ciidamadan ayaa waxaa barbar socday kuwo kale oo iyagu maamul ahaan aan hoostagin Imaaraadka, balse xiliyada qaar ay adeegsanayeen, kuwaa oo u badnaa Militeriga.
Waxa ay dowlada Imaaraadka dhismaha ciidamada ka laheyd dano gaara oo ay uga gudbeysay marxaladaha kala duwan ee ka jira Somalia sida inay isticmaalan xiliyada ay hujuumka kala kulmaan Al-Shabaab.
Goobaha ay ka dhacaan shirarka caalamiga iyo kuwa maxaliga ayey Imaaraadka kusoo bandhigi jireen in Somalia ay ka garab istaagan dhismaha ciidamada, iyagoo qoraalo kusoo bandhigaaya dhaqaalaha ay ku bixiyaan ciidamada.
MUSHAAR INTEE LA’EG AYEY IMAARAADKA SIISAA CIIDAMADA AY TABABAREE:
A-Miliratigaay Imaaraadka tababareen guud ahaan 980 askari, Dablaha waxuu qaataa $300, 2 Alifle $380, 3 Alifle $420 halka taliyaha hurinta uu qaato $450.
B-Comandosay tababareen guud ahaan 328 askari, Dablaha wuxuu qaataa $470, 2 Alifle $520, 3 Alifle $570 iyo taliyaha horinta oo qaata $620.
C-Ciidamada Gaarkaah(Special Force) ay tababareen guud ahaan waa 62 askari, Dablaha waa uu helaa $670, 2 Alifle $740, 3 Alifle 830 iyo taliyaha horinta oo qaata $950.
Dowlada Imaaraadka ayaa markii la’eega dowladaha kale noqoneysa tan ugu yar bixinta dhaqaalaha waxa ayna talaabo waliba ku xirtaa danaheeda gaarka ah, si ay uga faa’iideysato isku filnaan la’aanta dowlada.
Sidoo kale, Dowlada Somalia waxaa dhanka dhismaha ciidamada ka saacida dowlado dhowr ah, balse waxa ay kaga duwan yihiin Imaaraadka kuma faanaan waxqabadka ay u sameynayaan Somalia, waxa ayna dhammaan howlahaasi uga danbeeyan Dowlada.
Si kastaba ha ahaatee, dowlada Somalia ayaa goor hore ku dhawaaqday inay bixineyso mushaaraadka ciidamadeeda, iyadoo ka gaashaamaneysa in amni darada dalka loo isticmaalo ciidamadeeda, gaar ahaan kuwa mushaarkooda ay bixiyaan Imaaraadka.